merolagani - सुनको मूल्य घटेर ९० हजार भन्दा तल आइपुग्याे, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सुनको मूल्य घटेर ९० हजार भन्दा तल आइपुग्याे, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Sep 23, 2021 12:24 PM Merolagani
लगातार दुई दिन बढेको सुनचाँदीमा गिरावट आएको छ । असोज ७ गते, बिहीबार सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ८९ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रतितोला ८९ हजार १५० रुपैयाँ तोकिएको छ । बुधबार भने सुन तोलामा ९०० रुपैयाँले उकालो लागेर प्रतितोला ९० हजार १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । यस दिन चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले ओरालो लागेर प्रतितोला एक हजार १५५ रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । अघिल्लो कारोबार दिन भने चाँदीको मूल्य २५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार १६५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारी कर्मचारीको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । काेभिडकाे समयमा खटिने कर्मचारीहरूलाई सहयाेग पुग्ने गरी सरकारले यस्ताे घाेषणा गरेकाे थियाे । तर, सरकार परिवर्तनसंगै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छैनन् ।